alfalfa pellet machine.The for sale.alfalfa pellet သည်လောင်စာသို့မဟုတ်အစာအတွက်စက်ကိုပြုလုပ်သည်
စွမ်းရည်:200~ 400kg / h
alfalfa ဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ဘာကြောင့် alfalfa ကိုရွေးချယ်ရသလဲ?
Alfalfa, လူတိုင်းသိတယ်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးစားကျက်ဖြစ်သည်. alfalfa ၏အထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာများမှာအားအင်တက်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုနှုန်းဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အလွန်ကြွယ်ဝ။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်၎င်းထက်ပိုမိုကြီးထွားနိုင်သည် 20 နှစ်နှင့်ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည် 1-13 တစ်ခုချင်းစီကိုကြီးထွားလာရာသီအတွက်ကြိမ်. ဤစာလုံးများသည်အစာစားရန်လူကြိုက်အများဆုံးသာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်းသည်ဇီဝလောင်စာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်. တစ် ဦး Alfafa ဟာတောင့်စက်နှင့်အတူ, သငျသညျအလွယ်တကူနှင့်အပြည့်အဝ pelletizing များအတွက် Alfafa ဟာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားမှုမြန်နှုန်းရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ၎င်း၏အထွက်နှုန်းအလွန်မြင့်မားသည်. တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါ, ဒါကအာဟာရတွေအများကြီးပေးတယ်.
လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါ, ဒါကြောင့်အခြောက်သင့်သည်, စိုစွတ်သော Alfafa ဟာကောင်းစွာနှင့်အပြည့်အဝကိုမီးရှို့ပါဘူး.
အဓိကအသုံးပြုသော Alfalfa လုံးလေးများ?
Alfalfa လုံးလေးများသည်မြင်း၏အစားအစာတွင်ကယ်လိုရီထည့်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်. ၎င်းတို့သည်မြင်းများအတွက်ကယ်လိုရီများစွာရရှိသည်, သူတို့က forage-based ကြောင့်ဖြစ်သည်.
စားသုံးမှုအခြေခံသည့်ကယ်လိုရီများသည်သကြားဓာတ်နှင့်ဓာတ်ဓာတ်မြင့်မားစေသောပြmanyနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောအစေ့လုပ်ပါ. သူတို့ကမပါဘဲကယ်လိုရီပေး “ပူ” အချက်. ထွက်ရှိမြင်းအများစုရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ “ပူ” Alfafa ဟာအပေါ်.
pellets သို့ Alfafa ဟာဘယ်လိုလုပ်နည်း?
Alfalfa လုံးလေးများစက် alfalfa လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအတောင့်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်. များသောအားဖြင့် alfalfa လုံးလေးများကိုကျွေးမွေးရန်သို့မဟုတ်ဓာတ်မြေသြဇာသို့မဟုတ်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသည်. သို့သော်၎င်းတို့ကိုလောင်ကျွမ်းရန်အတွက်လောင်စာလုံးလေးများအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်သည်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်.
သငျသညျ pelletize သွားသည့်အခါ, ပထမအဆင့်မှာအစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့သည်အထိ alfalfa ကိုခြောက်သွေ့စေသည် 15%. စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းသည် Alfafa Alfa ၏လုံး ၀ အရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်. သင်ကခြောက်စက်ကိုသုံးနိုင်တယ်, သငျသညျလျင်မြန်စွာစံပြအစိုဓာတ်ကိုရနိုင်အောင်. ဒါမှမဟုတ်သင်ကသဘာဝကျကျခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်.
မင်းလုပ်ရမယ့်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ Alfafa ဟာကြိတ်ခြင်းပဲ. alfalfa ၏မူရင်းပုံစံသည် alfalfa လုံးလေးများစက်ကိုတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ရန်မသင့်လျော်ပါ. သငျသညျသေးငယ်တဲ့အမှုန့်ကကြိတ်ဆုံနှင့်ကြသောအခါ, pelletizing rate နှင့် pellets quality သည်ပိုကောင်းလိမ့်မည်.
ထိုအခါအရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းလာပြီ. alfalfa alfalfa လုံးတောင့်စက်၏လမ်းခွဲဖို့ထားပါ, သူတို့ကသေပေါ်မှာကော်လံတွင်းချုံ့ခြင်းနှင့်စက်ကနေဆေးရုံကဆင်းလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ. သို့သော်ဇီဝလောင်စာတောင့်များ၏မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုဂရုစိုက်ပါ. မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမှမဖြစ်ပေါ်ပါကသူတို့သည်သင့်အားမီးလောင်လိမ့်မည်. ခဏစောင့်ပါဦး, ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် alfalfa လုံးလေးများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်.
Alfalfa လုံးလေးများစက်၏နည်းပညာ Parameter